यी नै हुन्, चालक जसले ब्रेकफेल भएको बसलाई उकालोमा हालेर ४० जनाको ज्या’न” जोगाए ! – Butwal 24 News
October 12, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on यी नै हुन्, चालक जसले ब्रेकफेल भएको बसलाई उकालोमा हालेर ४० जनाको ज्या’न” जोगाए !
धनगडी – धनगढीबाट बाजुराका लागि छुटेको बस डडेल्धुरामा दु’र्घटना भएको छ। जिल्लाको अमरगढी नगपालिका -११ स्थित राइमा ना ७ ख १७४ नम्बरको बस ब्रेकफेल भएर दु’र्घटना । दु’र्घटनामा १६ जना घा’इते भएका छन्।
उनीहरुलाई उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ।त’त्काल बुझ्दा गम्भीर यान्त्रिक गडबडिका कारण हुन पुगेकाे बस दु’र्घटनामा यात्रुकाे जीवन बचाउन सफल चालकले अपनाएकाे उपायका लागि धेरै धन्यबाद, घाईतेकाे अवस्थानुसार तत्काल उपचारका लागि सबैपक्षकाे उध्दार र सहयाेगमा जुटाैं। दुर्घटनाको थप विवरण आउन भने बाँकी छ।
हेर्नुहोस मालिका समाचारले तयार पारेको भिडियो:आइतबार दिउँसो साढे एक बजे आयल निगमको डिपो भित्र ट्याङ्कर हाल्न खोज्दा १५ मिनेट भन्दा बढी जाम भएको थियो। आसपासमा अन्य सवारीसमेत पार्किङ गरिएका कारण उक्त क्षेत्रमा जाम भएको हो।
अन्य स्थानमा समेत दैनिक जसो सवारी जाम हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन रहेको चटकपुरका स्थानीय हरिप्रसाद भट्टले बताए। ‘यस्तो व्यस्त ६ लेन सडकलाई गाडी छुट्ने बसपार्क बनाइएको छ। अब बसपार्कको केही अर्थ नै भएन’ उनले भने।
दसैको मुखमा आयो दुखद खबर सवारी दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु